Suuraawwan babbareedoo Afrikaa torban kanaa - BBC News Afaan Oromoo
Suuraawwan babbareedoo Afrikaa torban kanaa
Suuraalee filatamoo torban kanaa ardii Afriikaa keessaa fi lammiilee Afriikaa biyyoota biroo jiraatan.
Goodayyaa suuraa Festiivaalii Sanbata darbe Tuuniiziyaatti geggaffamerratti shubbistoonni shubbisa qeensaa Taayilaand dhiheessaniiru.
Goodayyaa suuraa Roobii darbe Zaambiyaarra Loondonitti kan argamuu gara Kaateediraala Weestminister kan deeman hordooftoonni amantaa Kaatolikii, naannoo kopheewwan dhibbootaan lakkaawaman itti daawwataman deemanii ilaalaniiru. Koopheewwan daawwannaaf dhihaatan kunneen Poop Fraansis baqattoota irratti ilaalchisee dhaabbii qaban deggeeruun kan qophaa'eedha.
Goodayyaa suuraa Dorgommii Waancaa dubartootaa umurii waggaa 20 gadii Faransaayitti geggeeffamerratti, jifattuun Gaanaa Ruut Aniimaa, morma taphattuu sarara ittisaa garee Niiwuzilaand Elisaabeet irratti miilashee olkaasuun morma dhoofte
Goodayyaa suuraa Afriikaa Kibbaa keessatti Laazarees Moolaatleeg Roobii darbe suuraa abbaasaa daawwateerra. Miiseensa Kongresii paan Afriikaa kan ta'an abbaansaa ALA bara 1964 keessa poolisii ajjeeseerra jedhamuun murtee fannoon adabamaniiru.
Goodayyaa suuraa Hiddi dhaloota isaanii bittaa garbummaa dura fi mootummaa Daahomeey irra kan maddu Daah Dejaalaginii Agooli irra kan ta'an - sirna awwaalcha agboorratti Sanbata darbe Beeniin keessatti walitti qabamaniiru.
Goodayyaa suuraa Hojjetaan boordii filannoo Maalii, filannoon Dilbata akkamitti sirritti akka deemsifamu ilaalchisee ibsa wayita kennu. Pireezidaant Ibiraahim Abubaaker Kiyyoota fillannoocha deebisanii kan mo'atan wayita ta'u, mormitoonni garuu sagalee kenname hataniiti jedhu.
Goodayyaa suuraa Magaalaa gudditti Maalii Bamaakoo keessatti, namicha haalluu Keelloo dibate dabalatee namoonni hedduun guyyoota lama filannoo dursuun duula geggeessa turan.
Goodayyaa suuraa Dhiheenyatti kan kabajamu ayyaana Id irratti horii qalmaan qabatee Masrii gabaa Ashmuun keessatti mucaa mul'ate.
Suuraalee kanneen AFP fi Getty Images irraa arganne.
Suuraalee filatamoo Afrikaa: Sadaasa 10-16, 2017
Suuraalee dadansoo Afrikaa: Kubbaa miilaa fi Iida
Suuraalee filatamoo Afriikaa: Sadaasa 3-9, 2017